जन्मदिन- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
पुस ८, २०७५ कमल कोइराला
काठमाडौँ — ल बाबु अल्छी नगरी छिटो उठेर मसँग हिँड त,’ कपाल मुसार्दै अरू दिनभन्दा एक घण्टा सबेरै आमाले अंकितलाई उठाउनुभयो । आमाको कुरा सुन्नेबित्तिकै अंकित निद्राबाट जर्‍याकजुरुक उठ्यो ।
भान्सामा पुगेर एउटा ग्यालिन हातमा लियो, जसमा उसले विगत दुई वर्षदेखि पानी बोकेर ल्याउने गरिरहेको थियो । गाग्री र कपडा बोकेर आमा अघि लाग्नुभयो । आमाकै पछिपछि लागेर अंकित पनि सिस्नेखोलाको पँधेरातिर लाग्यो । नुहाइधुवाई सकेर दुवै आमाछोरा घरतिर फर्के । घर आएपछि आमाले अंकितलाई बाकसबाट नयाँ कपडा झिकेर लगाइदिनुभयो । कपालमा चिल्लो लगाई सर्लक्क पारेर कोरिदिनुभयो । उसका खुट्टामा पनि नयाँ जुत्ता सजिए । जिउमा सबै कुरा नयाँ भएपछि अंकित खुसीले फुरुङ्ग थाल्यो ।
आमा भान्साको तयारीमा जुट्न थाल्नुभयो । अन्य दिनभन्दा त्यस दिन उसको घरको चहलपहल अलि बेग्लै थियो । तर त्यसको कारणचाहिँ उसले बुझेको थिएन । अंकित गाउँका साथीलाई बदलिएको आफ्नो रूप देखाउन आतुर थियो । दिउँसोतिर बुबाले उसलाई बारीमा लैजानुभयो । बुबाको हातमा केही बिरुवा थियो । एउटा हातमा सानो कुटो र अर्काे हातमा हजारी बोकेर आमा पनि पछिपछि बारीमा पुग्नुभयो । घरमुन्तिरको बारीमा दुई डोकाजति मल थुपारिएको थियो । बुबाले ५/७ मिटरको फरकमा पाँचओटा एक हात जति गहिरो खाल्डो खन्नुभयो । खाल्डाको माटो निकाल्नमा आमाले सहयोग गर्नुभयो । बारीको छेउमा टुक्रुक्क बसेर अंकितले बुबाआमाका क्रियाकलाप नियाल्न थाल्यो ।
खनेर सिध्याएपछि प्रत्येक खाल्डामा मल हालियो । ‘बाबु १ त्यो बिरुवा यता लेऊ त,’ माटोसहितको प्लास्टिकमा बेरिएको बिरुवातिर संकेत गर्दै बुबाले भन्नुभयो, ‘ल बाबु अब आफ्नै हातले यी बिरुवाहरू यहाँ रोप ।’ आमाबुबाको निर्देशनअनुसार अंकितले पाँचओटा बिरुवा रोप्यो । माटाले खाल्डो पुर्दै आमाले भन्नुभयो, ‘अंकित १ आज तिम्रो जन्मदिन हो । आजदेखि तिमी पाँच वर्षका भयौ । त्यसैले तिम्रो जन्मोत्सवको अवसर पारेर यहाँ पाँचओटा सुन्तलाका बिरुवा रोपिएका हुन् । आजदेखि यी बिरुवा संरक्षण गर्ने दायित्व तिम्रो भयो ।’ मुसुक्क हाँस्दै अंकितले टाउको हल्लायो । गाईवस्तुले नखाऊन् भनेर बुबाले बिरुवावरिपरि बाँसका कप्टेराको गोलो बारले घेरिदिनुभयो ।
भोलिपल्टदेखि आँगनको डिलमा निस्केर अंकितले सुन्तलाका बिरुवा नियाल्न थाल्यो । ऊ बिरुवा बोट भएर कहिले रसिलो सुन्तलाको स्वाद चाख्न पाइएला भनेर रातदिन सोचिरहन्थ्यो । समय बित्दै गयो । विस्तारै सुन्तलाका बिरुवा पनि बोटमा रूपान्तरित हुन थाले । अंकित दिनमा एकपटक सुन्तला हेर्न बारीमा पुगेकै हुन्थ्यो । नियमित पानी हाल्ने र समय समयमा गोडमेल पनि गर्ने गथ्र्यो । आफ्नै जन्मोत्सव पारेर वर्षैपिच्छे बुबाआमाको सहयोगमा उसले सुन्तलामा मल पनि हाल्दै गयो । यसरी नै बारीमा सुन्तला लगाएको पनि ६ वर्ष बिते । सुन्तलाका बिरुवा रोप्दा पाँच वर्ष भएको अंकित पनि एघार वर्ष पुग्यो । अंकितको मिहिनेत दिनानुदिन बोट बनेर हलक्क बढ्दै गयो । छैटौँ वर्षको वर्षायाममा ती सुन्तलाका बोटमा ढकमक्क फूल फुले । उसलाई आफ्नो सपना तिनै फूलमा फक्रेझैँ अनुभूति भयो ।
साउन लागेपछि बोटका फूलहरू विस्तारै फलमा रूपान्तरित भए । अंकितमा हर्षको सीमा रहेन । बारीमा जाँदा प्रत्येक दिन तिनै सुन्तलाका दाना सुम्सुम्याउँथ्यो ऊ । एक दिन बुबाले सुन्तलाको फेदमा गोडमेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला अंकितले प्रश्न गर्‍यो, ‘बाबा ! अब यी सुन्तला कहिले खान पाइन्छ ?’ ‘पाकेपछि बाबु !’ फेदका झार उखेल्दै बुबाले छोटो उत्तर दिनुभयो । अंकितको मनको जिज्ञासा अझ मेटिएन । उसले फेरि सोध्यो, ‘कुन महिनामा पाक्छ त बाबा ?’ ‘मंसिर–पुसमा बाबु,’ छोराको जिज्ञासा शान्त पार्दै बुबाले थप्नुभयो, ‘दाना पहेँला भएर नपाकुन्जेल कहिल्यै टिपेर नखानू है बाबु !’ ‘हुन्छ’ सहमतिमा अंकितले टाउको हल्लायो । दसैँमा देवीलाई प्रसाद चढाउन बुबाले दुई/चार दाना सुन्तला टिप्नुभयो । दुर्गापूजा सकिएपछि आमाले केही केस्रा अंकितलाई दिनुभयो । मुखमा हालेर निलेपछि दसैँको जखमले पाठाले झैँ टाउको हल्लायो उसले । छोराले मुख बिगार्दै टाउको हल्लाएको देखेर बाबाआमाले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘नपाकी खाँदा यस्तै अमिलो हुन्छ र दाँत पनि कुँडिन्छ बाबु ! त्यसैले पाकेपछि मात्र खानुपर्छ ।’ अंकितले ‘हवस्’ भन्दै फेरि टाउको हल्लायो ।
हिउँद याम सुरु भयो । विस्तारै चिसो बढ्दै गयो । हरिया सुन्तलाका दाना पहेँलपुर भएर पाक्न थाले । लटरम्म फलेका सुन्तलाका कारण हाँगाले निहुरिएर भुइँ छुनै लागेका थिए । सुन्तला अंकितको सर्वप्रिय फल थियो । उसले सुन्तला चाखेको मात्र थियो । तर धितमरुन्जेल कहिल्यै पनि खान पाएको थिएन । त्यसैले पनि अघाउन्जेल फलफूल खान पाइने दिनको कल्पनामा हराइरहन्थ्यो ऊ । पुसको दोस्रो शनिबार अंकितको ११ औँ जन्मोत्सव परेको थियो । त्यस दिन बिहानै नुहाइधुवाई सकीवरी नयाँ कपडामा सजियो ऊ । दिउँसोतिर बुबाले भन्नुभयो, ‘बाबु १ जाऊ तिम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई बोलाएर ल्याऊ ।’ ऊ खुसीले मख्ख हुँदै साथीलाई बोलाउन गयो । सिद्धार्थ, कृपा, सिद्धान्त, सुशील, प्रज्वल, आरती, आकृति, हेमराज, कला, आशुतोष, सीमा, कृतिका, मनीषा, निरज, अनुष्का, मिलन, ममता, असीम, आशिष, गरिमा र किस्मत उसका मिल्ने साथी थिए ।
एकैछिनमा उसका आँगनमा साथीहरूको भीड गुजुम्म भइहाल्यो । आमाले आँगनभरि गुन्द्री र त्यसमाथि गलैँचा बिछयाउनुभयो । बुबाको आग्रहमा साथीहरू लहरै गलैँचामा बसे । ‘अरू वेला त साँझमा जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रम राखिन्थ्यो र रात्रिभोज गरिन्थ्यो तर आज किन हामीलाई दिउँसै बोलाइएको होला ?’ भन्ने खुलदुलीले भरिएको थियो सबैको मन । यत्तिकैमा बुबाले डालाभरि सुन्तला टिपेर ल्याउनुभयो । आमाले सबैलाई पुग्ने गरी भाग लगाएर अघिल्तिर राखिदिनुभयो । ‘हेर बाबुनानी हो १ अंकितले पाँच वर्ष गरेको मिहिनेतको फल आज बल्ल सबैलाई चखाउन पाइयो ।’
सुन्तला कोटयाउँदै बुबाले भन्नुभयो । ‘यस वर्ष अंकितको जन्मदिनको पार्टी नै सुन्तलाको भोज हो । ल अघाउन्जेल खाओ है १’ अंकितकी आमा लक्ष्मीले थप्नुभयो । साथीहरू मस्त हाँसे । परिश्रमको मीठो फल चखाएकोमा अंकितलाई सबैले धन्यवाद दिए । केही महिनाअघि अमिलो भएर मुख बिगारेको अंकितले पनि त्यस दिन आमासँग मागीमागी सुन्तला खान थाल्यो । पारिलो घाममा बसेर सबैले अघाउन्जेल सुन्तलाको रसिलो स्वाद लिए । सामूहिक तालीको पर्राले घरै गुन्जियो । अन्त्यमा सबैले एकै स्वरमा भने, ‘हयाप्पी बर्थ डे टु यु अंकित !’
प्रकाशित : पुस ८, २०७५ ११:४४
आश्विन २८, २०७५ कमल कोइराला
काठमाडौँ — कृपा र कीर्तन दिदीभाइ हुन्  । उनीहरू घरनजिकै रहेको एउटा विद्यालयमा पढ्छन्  ।
कृपा कक्षा तीनमा अध्ययनरत छिन् भने कीर्तन नर्सरीमा । उनीहरूका बुबा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ । आमा घरकी सामान्य गृहिणी । उनीहरू पहाडको एउटा सुन्दर गाउँमा बस्छन् । वरिपरि सुन्दर चौरहरू भएकाले उनीहरूको गाउँँको नाम नै सुन्दरचौर राखिएको छ । उत्तरतिर दन्तलहर खोलेर मुस्कुराइरहेका हिमाल र दक्षिणतिरको समथर फाँटले सुन्दरचौरलाई थप आकर्षक बनाएको छ । सुन्दरचौर पहिले सामान्य गाउँ थियो । समयक्रममा अहिले यो बिस्तारै पर्यटकीय गाउँँमा रूपान्तरित हुँदै छ । कृपा र कीर्तन त्यस गाउँका असल बालबालिकामा गनिन्छन् । उनीहरूलाई सबैले माया गर्छन् । पढाइमा पनि तेज भएकाले दुवै सबैका प्रशंसापात्र बनेका छन् ।
सुन्दरचौरमा मात्रै नभएर वरिपरिका गाउँसम्म उनीहरूको फरक पहिचान फैलिएको छ । गाउँमा आफ्नै उमेरसमूहका अरू साथीहरू खेल्न निस्कँदा पनि उनीहरू घरभित्रै हुन्छन् । जे खेल खेले पनि दिदीभाइ मिलेर खेल्छन् । घरभित्रै उनीहरूको आफ्नै खेलसंसार छ । उनीहरूकी आमा निर्मला घरका काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । घाँस काट्ने, गाईवस्तुको स्याहार गर्ने, मेलापात जाने, भान्साको काम गर्ने उहाका प्रमुख दैनिकी हुन् । दिदीभाइ पनि आफ्ना काम सकेर आमालाई सघाउन तम्सन्छन् । गाउँमै बसे पनि उहाँ सरसफाइमा निकै ध्यान दिनुहुन्छ । घरआँगन र सेरोफेरो सधै सफा राख्ने उहाँको स्वभाव छ । आमाकै स्याहारका कारण कृपा र कीर्तन सधैं स्वस्थ, निरोगी, हँसिला र सुकिला देखिन्छन् । अरू साथी दिनभरि माटामा खेली धुलाम्मे शरीर लिएर घर फर्कंदा सधैं आमाबुबाको गाली खानुपर्छ । तर उनीहरूले गालीका नाममा कसैको एक शब्द सहनुपरेको छैन आजसम्म ।
सधैं रचनात्मक काममा रमाउने दुवै दिदीभाइको स्वभाव छ । यो उनीहरूको नानीदेखिकै बानी हो । कृपा सिर्जनात्मक लेखनमा सधै अगाडि छिन् । लेखन सीपसम्बन्धी प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा उनी आजसम्म दोस्रो हुनुपरेको छैन । सुन्दर हस्ताक्षरमा विचित्रको शब्दजाल बुन्न सक्ने उनको विशेष खुबी छ । कीर्तनको चित्रकारितामा विशेष झुकाव छ । उनी सुन्दर चित्र बनाउँछन् । आफूले बनाएका चित्रमा आकर्षक रङ भरी सबैलाई चकित पार्छन् । चित्रहरूमा कलात्मक रङ–संयोजन गरी उनले आफ्ना घरका भित्ता सजाएका छन् । दिदीको लेखनकलाको सुवास चारैतिर फैलिएको छ भने भाइको चित्रकलाले घर धपक्कै बलेको छ ।
अलग पहिचान भएका मानिसको सोच सधै सिर्जनात्मक हुँदो रहेछ । दसैंतिहारको बिदा सुरु भएलगत्तै गाउँका अरू सबै साथी आफ्ना सबै काम बिर्सिएर खेल्न व्यस्त रहे । विद्यालयमा दिइएका गृहकार्य गर्ने जाँगर कसैले देखाएनन् । धुलोमैलो खेलेर सबैका दिन बिते । बिहान उज्यालो भएपछि घरबाट निस्किएकाहरू फाल्तु काममा दिनभरि हराउँथे । बेलुकी साँझ परेपछि मात्र टुप्लुक्क घर पुग्थे । आफ्ना कापीकिताब र झोला कहाँ छन् भन्नेसम्म पनि उनीहरूलाई थाहा भएन । उता कृपा र कीर्तनका बिदाका दिनहरू अत्यन्त रचनात्मक रहे । जरुरी काम पर्दाबाहेक बिदाका अधिकांश समय व्यस्त भए उनीहरू । कृपाले दसैंतिहारको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वका विषयलाई समेटेर लेख लेखिन् । कीर्तनले दिदीका लेखका भाव सुहाउने सुन्दर चित्रहरू बनाए । चित्रहरूमा कुची भरेर आकर्षक बान्की दिए । दुवै दिदीभाइका काममा आमाको सहयोग रह्यो ।
बिदामा कीर्तन र कृपा बाहिर नदेखिए उनीहरूका साथी छक्क परे । अरूले यमपपञ्चक सुरु नहँ‘दै देउसीभैलो खेल्न सुरु गरे । तर उनीहरू भने लक्ष्मीपूजाको साँझदेखि मात्र भैली खेल्न बाहिर निस्के । अरू अंग्रेजी र हिन्दीका अनावश्यक गीत बजाएर गाउँभरि होहल्ला मच्चाउने गरी देउसीभैलो खेले । तर उनीहरूले नेतृत्व गरेको देउसीभैलोमा भने मौलिकता थियो । मादल र खैंजडी उनीहरूका वाद्ययन्त्र थिए । व्यावहारिक सन्देशले भरिपूर्ण गीत गाउँदै आफैं देउसीभैलो भट्टयाए । अरूले देउसीभैलोबाट संकलित रकम तुरुन्त बाँडे । खानेकुरा किनेर उत्तिखेरै सिध्याए । लंगुरबुर्जा खेलेर स्वाहा पारे । पटाका किनेर त्यसैको बारुदसँगै पड्काएर सके । कसैले भोलिपल्टै वनभोज गई उठेको रकम झ्वाम पारिहाले । तर दिदीभाइले उठेको रकमलाई बडो जतनसाथ सुरक्षित राखे ।
दसैं–तिहारको लामो बिदा सकियो । गाउँका सबै केटाकेटी कोठामा छरपस्ट भएका कापीकिताब खोजेर झोला बोकी विद्यालय पुगे । बिदामा दिइएको गृहकार्य शिक्षकले मागेपछि गाउाँछिमेकका अरू साथीहरू झसंग भए । कसैले पनि दिइएका गृहकार्य बुझाउन सकेनन् । आ–आफ्ना कक्षाभरिमा कृपा र कीर्तन मात्र गृहकार्य बुझाउने विद्यार्थी थिए । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेपछि लाजले सबैका शिर निहुरिए ।
छठपर्वका दिन सार्वजनिक बिदा थियो । सोही दिन बिहानैदेखि उनीहरूको आँगन र नजिकैको खाली भाग सिंगारियो । उनीहरूको शृंगारकलाले सुन्दर गाउँको सौन्दर्यमा सुगन्धै थपिएझैं भयो । त्यस दिन दिदीभाइले गाउँभरिका मानिसलाई आफ्ना घरमा निम्त्याएका थिए । अचानक घरआँगन सिंगारिँदा गाउँलेलाई कौतुहल बढ्दै गयो । एकैछिनमा राम्रा कपडामा चिरिच्याँट्ट भई कृपा र कीर्तन बाहिर निस्के । कार्यक्रमस्थलको भित्तामा दिदीभाइले बिदामा गरेका रचनात्मक सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरियो । निर्देशन, नीति, सिद्धार्थ, सिद्धान्त र अनुष्काले आन्तरिक काममा उनीहरूलाई सहयोग गरे । दिउँसो एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । त्यो कार्यक्रममा कृपा र कीर्तनले आफ्ना बिदाका रचनात्मक अनुभव बाँडे । तिहार बिदामा देउसीभैलोबाट संकलित रकम पनि आफ्नै गाउँको पुस्तकालयलाई दिने घोषणा गरे । उनीहरूलाई पढाउने ध्रुव सरले दुवै दिदीभाइको बिदा मनाउने रचनात्मक कार्यको सराहना गर्न‘भयो । साथीहरूले बिदामा उनीहरू बाहिर ननिस्कनुको कारण बल्ल बुझे । ससाना केटाकेटीले गरेका सिर्जनशील कार्यक्रमको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ ०९:३१